New Year Resolution Quotes With Greetings | Nyakhomtsha 2021
Ukucinga ngokwenza Izigqibo zoNyaka oMtsha, okt isisombululo sonyaka omtsha ezo zilula ngokwenene. Kunamathele kubo kodwa kunzima. Nabani na onokudwelisa uluhlu lwe ”Kufuneka -Yenza” kwaye “Kufuneka uyenzile” kodwa ngokusebenzayo, bangaphi abahamba ngentetho xa kuziwa ekulandeleni kwethu izigqibo…Kuthatha amandla amakhulu omnqweno kunye namandla kunye nokuzimisela ukuphumeza 'uluhlu’ yezigqibo – Ekupheleni kosuku ngalunye. Ngoku ke kuza iindaba ezimnandi zokucwangciswa kwesisombululo sonyaka omtsha kunye nepragmatism inokubona ngezigqibo zakho kwaye ngaphambi kokuba wazi ukuba ubuya kugqitha igqabi elitsha, usuku ngexesha -yiza oku Nyakhomtsha!
Jonga izimvo zesisombululo zonyaka omtsha
1. Uluhlu olulula :
2. Musa ukuthelekisa :
3. Yiba nguwe :
5. Mamela entliziyweni :
6. Isitixo :
Izicatshulwa zeSigqibo soNyaka oMtsha
IsiGqibo soNyaka oMtsha
Seta icompact, iinjongo ezilula ukuzilawula ukuqala ngazo. Ukuba uzibona usakha i-Eiffel Tower nge-lego esetiweyo, ayicacanga into yokuba ukudana akuyi kuba kude.
IsiGqibo soNyaka oMtsha soMfanekiso oMnandi 4
Ukubulisa koNyaka oMtsha
Memes Unyaka Omtsha
Esi sisicwangciso esiqhelekileyo xa kufikwa kwizigqibo zoNyaka oMtsha. Yintoni enokusebenzela umhlobo wakho okanye ubumelwane ayinakusebenza ngokufanelekileyo kuwe, Oko kungenxa yokuba ungumntu owahlukileyo onesakhelo sentlalontle nesengqondo esahluke ngokupheleleyo. njengobhontsi ngamnye womntu ophilayo wahlukile. Ke izinto eziphambili ngokubaluleka. Ummelwane wakho okanye umntu omaziyo unokusebenzela injongo enye ngesizathu esahlukileyo kunye nokusonjululwa konyaka omtsha
Inyani nokuba awutshatanga okanye usebudlelwaneni, qala ngezinto ezintle / ezikhuthazayo ngokwakho. Jonga ngaphakathi, dont khangela into ongenayo. Ukwazisa, zibuze imibuzo embalwa efana – Ngaba ndonwabile ngokwam ? (Yithi ewe, yonke into ixhomekeke ekucingeni) Yintoni le ndinokuyiphucula ? ke into ebalulekileyo yile – Ulawulo lwexesha. Ngaphandle kokuba ubeke eceleni usuku lusuku lwakho, ke kukungenakwenzeka ukwakha ulonwabo, indlela efanelekileyo yokuphila ! fumana ixesha lakho. (izigqibo zonyaka omtsha)
IsiGqibo soNyaka oMtsha soMfanekiso oMnandi 1
Uxinzelelo loludala & Olona tshaba lutsha kunye nolona luqinisekileyo sonke ekufuneka sidibane nalo kwi-avatar ethile okanye enye kubomi bethu obuxakekileyo. Kodwa ke kukho iyeza – ibizwa Ukucamngca abanye banokubiza ngokomoya. Oku akuthethi ukuba ugoba amakhulu edola / Rupees yeklasi yeYoga yamva nje . Ubuhle bokucamngca kukuba unokuziqhelanisa nasekhaya, okanye kwindawo osebenza kuyo. Ayaneli kunika ukuzola engqondweni, ikwanceda ekuphuculeni impilo yakho iyonke.
Thatha inxaxheba kwindawo ohlala kuyo, Abahlobo okanye unxibelelane nombutho wesisa okanye ongenzi nzuzo okhonza abantwana, abantu abadala okanye izilwanyana – ukuba ungumthandi wendalo. Batyelele rhoqo okanye kube kanye ngeveki kwaye uchithe ixesha lakho ungazincedi, uya kumangaliswa ngumahluko owenzayo. Zininzi izinto ezingenakuthengwa ngemali kwaye kulapho uyakuzifumana khona! Nikela ngeempahla zakho ezindala, ifanitshala, iincwadi, izixhobo njl njl, endaweni yokulahla.
IsiGqibo soNyaka oMtsha soMfanekiso oMnandi 2
Cima izixhobo zakho eziphathwayo rhoqo kwaye uphume phandle ngaphandle kwazo okwethutyana yonke imihla. Cima umhlaba we-imeyile kunye ne-intanethi kwaye ubulise kummelwane olandelayo endaweni yoko. Umsebenzi ubalulekile – kodwa ukugcina ubomi ngokulinganayo kubaluleke ngakumbi! inokusetyenziselwa izincoko zokusombulula unyaka omtsha
Nokuba yeyiphi Izigqibo zonyaka omtsha setha, nokuba kukunciphisa umzimba okanye ukufunda okanye ukomelela komzimba, gcina umkhondo wenkqubela phambili yakho kwaye ungalibali ukuzizuzisa nanini na xa ufezekisa inyathelo elibalulekileyo. Ukuba uziva udiniwe okanye uthobekile ngamanye amaxesha, khumbula ukugcina iposti encinci- kuyabonakala enee-liners ezintle ezinje nge ”Ungayenza!” kwaye ” Qhubeka uhamba – uphantse walapho!”
Enye yezona zikhulu isisombululo sonyaka omtsha sokunciphisa umzimba
Konke okusemagqabini kuLutsha kulo nyaka mtsha!!!
IsiGqibo soNyaka oMtsha soMfanekiso oMnandi 3
“Nokuba uyintoni na usoyika ukuyenza, Yenze."
“Iminqweno ngamathuba. Bukela ukwenza umnqweno. ”
― ULailah Isipho sika-Akita, Cinga ngokuKhulu: Yiba Mkhulu!
Utshintsho, sukufaka izinto ezintsha ebomini bakho njengesisombululo sonyaka omtsha. Endaweni yoko, yenza okungakumbi esele kukusebenzela kwaye uyeke ukwenza izinto zokuchitha ixesha. "
“Ngaba izityebi ziya kuqhubeka zityeba kuNyaka oMtsha? Ngaba amahlwempu aya kuqhubeka ehlupheka kuNyaka oMtsha? Ke ngenxa yothixo indlela emhlabeni uNyaka oMtsha oyakubizwa ngokuba mtsha?”
“Unyaka omtsha yindlela entsha yokumema inguqu, intabalala nempumelelo kubo bonke ubomi. ”
― UAmit Ray, Uxolo noBumnandi kunye neNyaniso: Ukuphila ngoBungqina
“Nokuba kuyanyanzelwa okanye kuyamenywa, utshintsho alunakuphepheka. ”
― UAndrena Sawyer
Isigqibo soNyaka oMtsha esihlekisayo
Categories 2021, Happy New year, New Year Quotes Tags Isigqibo sonyaka omtsha, New Year Resolution greetings, New Year Resolution quotes Post navigation
Iifoto zeFacebook Imvelaphi yeHD
2 thoughts on “Isigqibo sonyaka omtsha 2021”
Pingback: Nyakhomtsha 2020 Ukubulisa - Nyakhomtsha